Tontolo Arabo: Tratry ny gripan’ny iPad ny Arabo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Avrily 2010 8:09 GMT
“Azoko ny iPad-ko :D” hoy ny tweet nalefan'i Khalid Alsudairy, Saodiana 22 taona mpianatra ao Boston.
Tsy niandry ela, nipariaka nanerana ny faritra ny vaovao, narahan'ireo fiarahabana azy noho io fisongadinana io. Nandeha lavidavitra kokoa ny blaogy Saodiana iPhad (Ar) momba ny teknolojia ka niresadresaka fohy tamin'i Alsudairy amin'ny “maha iray amin'ireo Arabo voalohany manana ny iPad” azy.
Isan'ireo fanontaniana novalian'i Alsudairy nandritra ny resadresaka ity:
Q: Anatin'ny sokajy toy inona amin'ireo mpampiasa iPad no misy anao? Ny iPad ve ahitan'ny mpampiasa tsirairay ny ilainy, ohatra ho an'ny fandraharahana, ny fialamboly, ny mozika, ny ankizy, ny avara-pianarana sy ny media?
A: Ny iPad dia ho ampiasaiko hamakiana boky sy hijerena videos ary hilalaovana. Tsia, tsy dia eritreretiko loatra ho afaka hanampy ny mpandraharaha izay mila solosaina feno sy tanteraka ary rindrambaiko mifampidimpiditra be izy ity.
ny iPad-n'i 248am
Any Koety, Mark koa dia milaza fa isan'ireo mpampiasa voalohany ny iPad. Manoratra ao amin'ny 248am, hoy ilay mpitoraka blaogy manamarika:
Vao avy nandray ny iPad avy amin'ny X-Cite mba hojerena sy handramana aho. Vao tonga avy any Etazonia io ary iray amin'ireo iPad voalohany eto Koety. Ny fahatsapako voalohany dia ‘cool’ kokoa noho izay hita anaty sary no fijery ny iPad, tena fitaovana tsy mampino, tiako ilay izy, mahafinaritra ny fàfana (ecran), tsara lavitra noho ny fàfan'ny MacBook-ko izay tendreko amin'izao fotoana.
Tonga dia voamarik'ireo mpamaky avy hatrany ny elanelam-bidy misy eo amin'ny Etazonia sy Koety, ka maro tamin'izy ireo no nisafidy ny hanafatra ny azy avy any ivelan'i Koety.
Manoratra i Yousif :
‘Lozanao ry Xcite mikapoka ny olona amin'ny vidiny efa mihoatra ny avo roa heny be izao! Vao avy nanafatra any amin'ny Apple aho ary asaiko alefany aty amiko.
Ary i Funny Story manampy fa:
Iza no ho kentrina handoa avo roa heny amin'ny vola tokony hahafahanao mividy an'io amin'ny aterineto?
Ary ao amin'ny faritra ho an'ny fanamarihana koa, i Eagle dia manana fanazavana iray amin'ny anton'ilay vidiny lafo be. Hoy izy manoratra:
Ho fampahafantarana anareo, tany amin'ny toeram-pivarotan'ny xcite aho ary nanontany ireo bandy tao ny antony anaovana ny vidin'izy ity midangana be toy io miohatra amin'ny vidiny any Etazonia. Nolazain-dry zareo fa amin'izao fotoana dia manome vola olona ry zareo mba hitondra ireo fitaovana ireo avy any Etazonia omaly alina, ary dia tafiditra ao anatin'ny vidiny izay. Raha ny fiheverana fa i Koety no firenena voalohany ivelan'i Etazonia nampiditra azy ity, tsy dia olana loatra. Afaka telo volana any ho any vao ho tonga any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana io. Ankehitriny raha ampitahainao amin'ny vidin'ny iPhone io, tsy dia ratsy loatra ka!
Mandritra izany, Kuwaiti N, izay mitoraka blaogy ao amin'ny Up Till One, dia tsy nandray am-po loatra ireny fanamarihana ireny ary dia niolomay nanindritra ny tanany ho amin'ny iPad – ary dia nampakatra sary marobe tamin'ny “namahàna” ilay kilalao vaovaony.
Ndeha hiverenana i Mark, eto no misy vaovao bebe kokoa momba ireo mpampiasa iPad ao Koety.